Archive du 20200320
Fiarovana ny tontolo iainana Azo antsoina maimaim-poana ny laharana « 512 »
Tamin’ny taona 2013 no napetraky ny fikambanana Alliance Voahary Gasy (AVG), ny laharana maitso « 512 ».
Faha 30 taonan’ny Gasy ka mahery Ho marihina amin’ny ady Morengy goavana eto Antananarivo
Nampahafantarina omaly tetsy amin’ny HDA Analakely omaly ny fizotry ny fankalazana ny faha 30 taonan’ny Gasy ka mahery na GAKAMA,
Tsipy kanetibe Malagasy Nivoaka ny fandaharana FSBM taona 2020
Navoakan’ny FSBM “Federation Sport Boules Malagasy” tarihan’ny filohany Dolys Randriamarohaja,
CORONAVIRUS Maneran-tany Monaco : voan’ny Coronavirus ny Printsy Albert
Nilatsaka ny vaovao ofisialy omaly : voan’ny Coronavirus ny Prince Albert de Monaco.Na izany aza anefa tsy misy mampatahotra ny toe-pahasalamany raha ny vaovao ofisialy nivoaka omaly.
Fisorohana ny Coronavirus Manazava ny saim-bahoaka ny polisim-pirenena
Tsy ny vahoaka Malagasy rehetra no mahita sy mihaino ireny haino aman-jery samihafa ireny ka maharaka ny vaovao misy eto amin’ny firenena .
Fampiroboroboana ny Indostria eto Madagasikara Misy ny fanantenana raha…
Nampahafantarina omaly tetsy amin’ny hotely Colbert Antaninarenina indray ny “baromètre de l’industrialisation de Madagascar fahaefatra” nokarakarain’ny “Alliance pour l’Industrialisation” ikambanan’ny FIVPAMA, SIM, ary ny CREM.
Indostria eto Madagasikara « Tokony hamoraina ny fepetra amin’ny famatsiana ara-bola”
Notanterahina omaly ny atrikasa nanehoana ireo vokatry ny andiany faha 4 amin’ny mari-drefy entina handrefesana ny Indostria eto Madagasikara (Barometre de l’Industrialisation à Madagascar).
Tsenan’Ambodivona Misy elanelana tsy mazava ny vidim-bary
Nitohy omaly ny fidinana tampoka nataon’ny Minisitry ny Indostria sy ny varotra ary ny asa tanana, Lantosoa Rakotomalala sy ireo mpiara-miasa aminy ho fanaraha-maso ny vidim-bary.
Arlette Ramaroson “Tsy tokony afenina raha sanatria efa tonga eto ny Coronavirus”
Maro ny tsaho niely hatramin’ny omaly, indrindra tao anaty tambajotran-tserasera facebook fa efa misy olona tratra ilay aretina coronavirus eto amintsika.
Hira “Lehilahy manam-bola” Raikitra ny disadisan’i Michel Patrick sy Big MJ
Ny volana desambra lasa teo dia nivoaka tamin` ny endriny vaovao ilay hira « Lehilahy manam-bola » nindramin’i Big Mj ka nohirainy tamin’ny fombany na “cover”.
Ambohimanarina Lehilahy iray tratra nisintona finday teny an-tanan’olona
Lehilahy 23 taona no voasambotry ny polisy ao Ambohimanarina ny 18 Martsa teo noho ny resaka fanendahana. Ramatoa iray nandray antso tamin'ny findainy no nanaovan'ity jiolahy ity ny asa ratsiny teo Ambohimitsinjo Ambohimanarina.
Entana ilaina ao an-tokantrano Misy ireo tranom-barotra manavao ny tolotra
Maro ny fianakaviana izay te hanavao ny ao an-tokantrano ao rehefa volana martsa tahaka izao, mialoha ny fetin’ny Paska .